You searched for alahady - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 05 desambra 2021 MINOA NY FIFALIANA AO AMIN’NY TOMPO Alahadin’ny Firaisan’ny Diakona sy ny Loholona, FJKM Amparibe Famonjena “Mifalia mandrakariva ao amin’ny Tompo,” Filipiana 4: 4a 4a Alahady voalohany amin’ny volana desambra 2021, ary fotoana izay ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe: « MINOA NY …
Continuer la lecture de « Alahady 05 Desambra 2021 »
ALAHADY 28 NOVAMBRA 2021 “TAFATOETRA NY FON’IZAY MIANDRY NY TOMPO” Alahady fanateram-bokatry ny Zanaka Am-pielezana FJKM Amparibe Famonjena “Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin’ny faharetana.” Romana 8:25 Alahady Advento I ity alahady ity, alahady farany amin’ny volana novambra. Alahady nitondrana am-bavaka ny KPMS (Komitim-Pirenena Miady amin’ny SIDA) Alahady fanateram-bokatry ny …
Continuer la lecture de « Alahady 28 Novambra 2021 »
Alahady 21 novambra 2021 Alahady faha 25 manaraka ny Trinite Masina Alahadin’ny SAMPATI manerana ny Sahan’ny FJKM TAFATOETRA NY FON’IZAY MIANDRY NY TOMPO « Hetseho mafy ny herinao » Nahoma 2 :2b ; « Tanteraho ny fanompoanao » 2Timoty 4 :5b Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny fanokafana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taona …
Continuer la lecture de « Alahady 21 Novambra 2021 »
ALAHADY 14 NOVAMBRA 2021, fotoam-bavaka 9 ora maraina. Alahady faha XXIV manaraka ny Trinite Fitondrana amim-bavaka ny fitantanana ny fananan’ny FJKM Ivom-bokatry ny Asa Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala “TAFATOETRA NY FON’IZAY MIANDRY NY TOMPO” “Izay rehetra manatona Ahy sy mandre ny teniko ka mankatò azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy ” Lioka 6 : 47 Ny Filohan’ny Gazety …
Continuer la lecture de « Alahady 14 Novambra 2021 »
Alahady faha 7 novambra 2021 Alahady faha 23 manaraka ny Trinite Fanompoam-pivavahana nandraisana ny Katekomena andiany « MIRAY » ho Mpandray ny FANASAN’NY TOMPO Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « TAFATOETRA NY FON’IZAY MIANDRY NY TOMPO » « Ary amin’izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin’ny fanjakan’ny Rainy » Matio 13 : 43a Ny Litorjia amin’ny endriny …
Continuer la lecture de « Alahady 07 Novambra 2021 »
ALAHADY 31 OKTOBRA 2021 IVOMBOKATRY NY SAMPANA MPIANGALY ZAVAMANENO (SMZM) « Asandrato ny hira, ka velezo ny ampongatapaka, ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mbamin’ny valiha » Salamo 82 :1 Alahady ivom-bokatra niangaliana ny zavamaneno hitondra aim-panahy. Alahady voatondro, eto amin’ny sahan’ny Fjkm koa, ho alahadin’ny Reformasiona. Ny Filoha mpanampy, Rajaofetra Voahangy, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina …
Continuer la lecture de « Alahady 31 Oktobra 2021 »
Publié le 26 octobre 2021 3 novembre 2021
MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY Alahady ivom-bokatry ny SAFIF “Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo; ka nony efa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako…” Marka 14:22-25 Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny Masina indray androany Alahady faha 24 Oktobra 2021. Ity …
Continuer la lecture de « Alahady 24 Oktobra 2021 »
Publié le 18 octobre 2021 3 novembre 2021
ALAHADY 17 OKTOBRA 2021 Alahady fahatelo “MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY” « Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina. » Matio 22:14 Alahady faha XX manaraka ny Trinité ity alahady ity, alahady fahatelo amin’ny volana oktobra izay mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny fanasany ». Alahady koa hitondrana am-bavaka ny MAMRE …
Continuer la lecture de « Alahady 17 Oktobra 2021 »
ALAHADY 03 OKTOBRA 2021 ALAHADY FAHA XVIII MANARAKA NY TRINITE MASINA FITONDRANA AM-BAVAKA NY MPITANDRINA RAHARIJAONA SOLOFONIRINA MIANAKAVY “MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY” Tamin’ny 9 ora maraina no nanomboka ny fotoam-bavaka. Mialoha izay dia nosokafana tamin’ny fomban’ny Fiangonana ny taom-pianarana vaovaon’ny Sekoly Alahady 2021-2022. Ny Biraom-Piangonana no nandavorary ny fanatontosana ny fotoana. Rakotomanana Andrimbazotiana no nitarika izany. Ny …
Continuer la lecture de « Alahady 03 Oktobra 2021 »
ALAHADY FAHA 26 SEPTAMBRA 2021 « Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa » Alahady faha 16 manaraka ny Trinite. Alahady natokana itondrana am-bavaka ireo mpianatra katekomena Andiany Miray sy ny sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana SFP). Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.Ny diakona Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana.Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no …
Continuer la lecture de « Alahady 26 Septambra 2021 »